China Plastic Pulverizer 55kw mota Kit Kugadzira uye Fekitori | Xinrui
Inokodzera epurasitiki simbi, bhakoro bhodhi, ecological huni, kona mutsara, dombo repurasitiki ruoko sleeve, chimiro, wallboard, pombi, XPS, chivakwa template, inopupuma bhodhi, SPC, WPC pasi.
Nyeredzi-delta inokonzeresa magetsi kabati
yakasimba magnetic feeder 250W
Kubvisa uye kubvisa-ironing
Mhepo Inovhuvhuta-simba 7.5W
simbi isina simbi inotonhora pombi
Kuudza uye kutonhora
DIA 1000mm kutenderera vibrating skrini
kubva feni 1.1KW
Pulse guruva kana bhegi firita kubviswa
55KW mota paramende
Kushanda musimboti uye hunhu
Iyi pulverizer yepurasitiki inoshandisa kufamba kwehukama pakati penzvimbo inochinja zino dhisiki uye dhisiki regedhi rezino kuti zvinhu zvinyatsopwanyika nekukanganisa kwedhiza rezino, kukweshera uye kukanganisa pakati pezvinhu. Izvo zvakapwanywa zvinhu zvinotakurwa kupinda mudutu nenzira yekuipa kumanikidza mweya kutakurwa, uye guruva rinosvinwa uye kudzoreredzwa nebhokisi rekuunganidza guruva kuburikidza nehombodo yejira.
Yakakwira-yekumhanyisa zvidimbu zvakapwanywa zvishoma mushure mekurova ndiro yezino uye inoburitswa nekusveta, nepo zvidimbu zvakakura zvichiramba zvichikanganisa uye zvinotorwa mushure mekupwanya. Nenzira iyi, mutoro waderedzwa, iko kukuya kushanda kunovandudzwa, uye hupfu hwakatonhorera zvakafanana.
Yakakura PVC yakanakisa yekugaya muchina ndiyo mhando nyowani nyowani yekugeda muchina yakagadzirwa nekambani yedu nekutora tekinoroji yeGerman. Zvimiro zvaro zvinotevera:
1.Kuchienzaniswa nemhando imwechete yemagayo, kuburitswa kwesimba rakafanana kunogona kuvandudzwa zvakanyanya uye simba rekushandisa rinogona kuponeswa.
2. Guruva rekubvisa mudziyo unowedzerwa kunyatso kuderedza kusvibiswa kweguruva.
3.tho fan inodzima zvinhu, vibrating screen kusarudzwa, kusarudzwa kweasina kukodzera zvinhu, otomatiki kumashure achikuya muchina kudzikisa kusimba kwevashandi kweanoshanda.
4. Vharo remukova remuchina wekutambira rinogona kuvhurirwa
gonesa kugadzirisa uye kutsiva chishandiso.
5.Shandisa geomantic inotonhora zvakapetwa, zvirinani kudzikisira kunoshanda tembiricha nzvimbo mukati meairframe inokanda makings kwete nyore kunze kwechimiro.
1. Dhizaini dhizaini dhizaini, diki saizi, yakaderera simba rekushandisa, yakakwira kuburitsa.
2. Nyore mashandiro ebanga uye yakatarwa banga clearance ne
manyorerwo kugadzirisa, nyore kudzora saizi yekuparadzanisa.
3. Chishandiso chiri nyore kutsiva, banga rinogona kudzokorora kudzokorora kushandiswa.
4. Injini huru yakagadzirirwa mweya uye kutenderera kwemvura kutonhora system.
Zvakanakira ZvePurasitiki Firimu Kupwanya
Mukuita kweanti-corrosion uye anti-ngura kurapwa, yakakosha dhizaini inogamuchirwa kudzivirira zvinhu kuvuza. Dhizaini yechinhu chinoburitsa inoita kuti zvive nyore kwazvo kune anoshanda kuchenesa.
Pashure: Kuvaka Plate Pulverizer Model 80
Zvadaro: Waste Plastic Pulverizer 75kw mota Kit